जितेर पनि हारिरहेकी गोर्खाली आमै – हाम्राे गोरखा » जितेर पनि हारिरहेकी गोर्खाली आमै
धार्मिक तथा पर्यटकीय
गैर सरकारी संस्था
चुम नुब्री गाउँपालिका
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
नागरिक र जीवन
उच्च माध्यमिक विद्यालय
निम्न माध्यामिक विद्यालय
जितेर पनि हारिरहेकी गोर्खाली आमै
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २३:४१
मुडुलो टाउको । बचेखुचेका अधिकांश कपाल सेता छन् । अनुहारको चाउरीले उकालिँदै गरेको बुढ्यौलीको सिम्बोल दिइरहेछ
हत्केला च्यापुमा अड्याएर पर कतै क्षितिजमा हेरिरहेछिन् सावित्री अधिकारी उर्फ गोर्खाली आमै । ‘८० वर्षकी भएँ ।’ तनमा बुढ्यौली छाए पनि मनमा भने तन्नेरी दिनका विम्बहरू झल्याकझुलुक भइरहेछन् ।
‘नहेर डोको, नहेर नाम्लो, पुरानो बरियो
खानु छ कावा, ताप्नु छ हावा बन्देजमा परियो ।’
बिनालय गीत सुनाउँदै तन्नेरी वयका दिनहरू कोट्याइन्, ‘यो गीत फोरा (फोहरा) दरबार बस्दा गाउँथ्यौं । बाहिर खुला वातावरण थियो, हामी भने निस्फिक्री बाहिर निस्किन नपाउने । बाहिर निस्किनुपर्‍यो भने एकजना साथी लगाइदिन्थे । काम नभए पनि भित्रै थुनिइरहनुपरेको बिलौना मिठो लयमा गाएर पोख्थ्यौं । हाम्रो गीत सुनेर जर्नेलहरु हाँस्थे ।’ फोहरा दरबारमा करिब १७ वर्ष चाकडी गरेर बसेकी थिइन् साबित्री । फोहरा दरबार माधवशमशेरको स्वामित्वमा थियो । इतिहासकारहरुका अनुसार राणकालीन समयमा निर्माण भएका ४० वटा भव्य दरबारमध्ये फोहरा दरबार पनि एक थियो । त्यही भव्य दरबारमा जर्नेल–कर्नेलहरूको चाकडी गर्ने सर्वसाधारणमध्येकी एक हुन् साबित्री पनि ।
साबित्रीले दरबारमा कहिले भात पकाइन्, कहिले दरबारीयाहरुले धर्मकर्मका नाममा गर्ने पुजापाठका लागि दुना, टपरी गाँस्ने जिम्मा लिइन् । दरबारमा राणाजीहरुले निकै मस्ती गरेको इतिहासका विभिन्न अभिलेख बताउँछन् । मनोरञ्जनका लागि सुन्दरीहरुलाई रानी, रखौटी विभिन्न नाममा दरबारमा राखे । सावित्रीका अनुसार उनी पनि युवावयमा सुन्दर युवती थिइन् । तर, राणाको दरबारमा कुन हैसियतसम्मको काम गरिन्, उनले खुलाइनन् । यति मात्रै भनिन्, ‘दरबारमा आइमाईको डफ्फा नै हुन्थ्यो । प्रत्येक कोठामा कम्तीमा चार जना युवती खडा बस्नुपर्ने ।’ सायद, त्यो डफ्फाभित्र उनको पनि ड्युटी लेखिएको हुन्थ्यो ।
युवा बेलाको करिब १७ वर्ष फोहरा दरबारमा बित्यो साबित्रीको । तीन रुपियाँ तलबबाट काममा बसेकी उनले चार सय रुपियाँसम्म तलब खाइन् । उनका पालाका घरानिया राणाहरू एकएक चिन्छिन् साबित्री । ‘भरत जर्नेल, ऋषिकुमार, दामोदर शमशेर सबैसँग बिन्ती बिसाउँथेँ’, भन्छिन्, ‘शशीशमशेरलाई त मैले हजुर भोलिको जर्नेल हो भनेकी थिएँ, नभन्दै भइहाले ।’ फोहरा दरबारमा खान नपाउनेलाई बोलाएर एउटा रोटी भएपनि खुवाउँथे । दु:खीलाई दुई चार सुकामोहर सहयोग दिन्थे । त्यस्तै सहयोगअन्तर्गत चाकडीको अवसर पाएकी थिइन् साबित्रीले । भलै, सुन्दर रूपले वा राणाहरुले दु:ख बुझेर चाकडीको अवसर दिए, उनै जानुन् ।
सावित्री अधिकारी, गोरखाकी खानदानी ब्राह्मण परिवारकी बुहारी । गोरखाको खैरहनीमा सात वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो भरत अधिकारीसँग । साबित्रीका अनुसार ससुरा पटनाका लप्टन थिए । परिवारमा ठूलो रजगज थियो । सम्पत्ति, जग्गाजमिन प्रशस्तै । ‘म आफैले पनि १६ पाथी असर्फी भरेकी थिएँ ।’ सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि बताउँदै साबित्रीले सुनाइन् । सम्पन्न परिवार भएकै कारण ५० वर्षका भरतसँग मागीविवाह गराउन राजी भएका थिए सावित्रीका माइती । ‘सम्पत्ति टन्न भएको परिवारमा परे छोरीले सुख पाउली’, सायद यस्तै सोचेका थिए ।
श्रीस्वस्थानी व्रतकथामा सात वर्षकी गोमा ब्राम्हणीका मातापिताले शिवजीको श्राप लागेका कारण ७० वर्षका शिवशर्मा वृद्धलाई छोरी दिनुपरेजस्तो बाध्यतामा थिएनन् सावित्रीका बुबाआमा । रजस्वलाअघि छोरी अन्माउँदा पुण्य कमाइन्छ, स्वर्गमा बास पाइन्छ भन्ने अन्धविश्वास अनि भरत अधिकारीको पारिवारिक सम्पन्नताले तानेको थियो अनमेल विवाहका लागि । त्यही अनमेल विवाह सावित्रीको जीवन भताभुङ्ग बनाउने माध्यम बन्यो । जीवनमा भौँतारिँदै कहिले दरबारको रजगजसमेत भोगिन् त कहिले सडकपेटीको बास । ‘ऊ ५० वर्षको, म सात वर्षकी । घरमा मागेर धुनधानसँग बिहे गरियो । त्यही वर्ष सौता ल्यायो । मलाई टुलुक्क हेरेन । म लुगा लाउन पनि नजान्ने थिएँ । सौता ल्याउँदा लगलग काँप्थे रे । बालकालमा बिहे गरिदिए, लोग्नेको माया जीवनभर पाउन सकिनँ ।’
बिहे गरेको पाँच वर्षसम्म चुपचाप बसिन् सावित्री । लोग्नेको माया फर्किन्छ भन्ने आशा त्यो बालमनमा थियो कि † तर पतिले वास्ता गरेनन् । अन्तत: १२ वर्षकी किशोरी अंशका लागि मुद्दा लड्न थालिन्, ‘जेठाजुले मुद्दा लड् भनेर लेखिदिए । जिल्ला अदालत गोरखामा अंश मुद्दा लड्न गएँ ।’ १२ वर्षको उमेरदेखि मुद्दा लड्न थालेकी सावित्रीले ८० वर्षसम्म पनि अंश पाएकी छैनन् । अंश लड्दा पाएको दु:ख सम्झँदै थपिन्, ‘गोरखा अदालतमा नौ वर्ष मुद्दा लडें, पोखरा अदालतमा पनि नौ वर्ष मुद्दा लडें, क्षेत्रीय अदालतमा तीन वर्ष । सबै तहमा मुद्दा जिते पनि सौताका परिवारले जग्गा भोगचलन गर्न दिएनन् । क्षेत्रीय अदालतपछि सर्वोच्च अदालत आएँ । सर्वोच्चमा तीन वर्ष अनि फेरि तीन वर्ष न्याय समितिमा मुद्धा लडें । अझै न जग्गा पाएँ, न दिने भनेको क्षतिपूर्ति ।’ पतिका विरुद्ध मुद्दा लड्न थालेकी सावित्री अहिले सौताका छोराहरुसँग अंश मागिरहेकी छिन् ।
मुद्दाको तारिख धाउन पटकपटक काठमाडौं आउजाउ गर्दा दरबारमा चाकडी गर्न बसेका महिलाहरु साथी बने । अनि, दरबारमा चाकडी गर्नेहरूको सूचीमा पनि थपिइन् उनी । दरबारबाटै छ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिन् । आइमाईलाई एक्लै घर पठाउनुुहुन्न भन्ने मान्यताको त्यो समयमा दरबारबाट एक जना साथी लगाइदिएर सार्वोच्च पठाउँथे रे उनलाई । फोहरा दरबारमा चाकडीमा बस्दा जर्नेल–कर्नेलहरुले सहयोग गरेर अंश दिलाइदिन्छन् भन्ने आशा थियो । तर, साबित्रीले न्याय पाइनन् ।
चाकडी गर्न बस्दा जर्नेल–कर्नेलदेखि राजाका सचिवसम्मकालाई बिन्ती बिसाउन पुगेको स्मरण गर्दै भनिन्, ‘जेठाजु ऐन–कानुन जानेका थिए । मुद्दा गर भनेर लाइदिए, त्यसैले लडें । आफन्तहरुको सहयोग जुटाउन टाढाटाढासम्म एक्लै धाइरहेँ । आफ्ना मान्छेहरु जिम्दार थिए, पोखरामा भक्तबहादुर डिट्ठा, भान्दाइ थिए । सर्वोच्चमा पशुपति न्यायाधीशको छोरा न्यायसमितिमा थियो । उसको नाउँ कुश्मराज हो । बिहान ब्वाँब्वाँ गाइ कराउँदा मुद्दा हेरिदिनुस् भन्दै जान्थें । ‘ए दिदी म छु धन्दा नमान’ भन्थ्यो । त्यति बेला शान्तकुमार जर्नेल भयो । उज्यालो नहुँदै पुग्थें । सबैले तैंले न्याय पाउँछेस् भन्थे । कसैले केही गरिदिएनन् । अहिले कोही भेटिदैनन् ।’
उनले आफ्नो दु:खको फेहरिस्त लगाइन्, ‘जिल्ला अदालतबाटै पाँच सय मुरी धान फल्ने जग्गा जितें, त्यै पनि दिएन । बूढा पनि मरे । तीन वर्षअघि साढे तीन लाख जम्मा दिने निर्णय गरेर कागज पनि गरेको थियो । सौताका छोराहरुले पैसा दिँदैनन् । त्यै भए पनि पाइन्छ कि भनेर अझै वकिल लाइरहेकी छु ।’ वकिललाई मुद्दाको कागज लेख्न लगाए चार हजार लाग्छ । त्यसैले उनले यसअघिका सबै मुद्दाका मिसिल सिएर राखेकी छिन् । खर्च अभावका कारण सीधै क्षतिपूर्तिको कागज कार्यान्वयन गराउन वकिलको सहयोग माग्दै ढोकाढोका चहारिरहेकी छिन् साबित्री ।
सावित्री अधिकारी आफूलाई गोर्खाली आमै भन्न रुचाउँछिन् । कडा मिजासकी एक महिला । सधैंभरि अशंमुद्दा लडेरै जीवन गुजारिन् । त्यही मुद्दा लड्ने शिलशिलाले उनलाई राणाका दरबारको चाकडीमा पनि ल्याइपुर्‍यायो । पछि केही समय घर फर्किइन् । तर, मुद्दा लडेकी एक महिलाले पारिवारिक संरक्षण पाउन सकिनन् । अन्तत: काठमाडौंको ठमेलमा माइतीका आफन्तको संरक्षणमा केही वर्ष गुजारिन् । दरबारमा काम गर्दा जोगाएको केही पैसाले दैनिकी गर्जो टरे पनि अहिले उनीसँग खाने–बस्ने जोहोसमेत छैन ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले फोहरा दरबार भत्काएर बाँकी रहेको भग्नावशेषझैं उनको मानसपटलमा दरबारमा बिताएका स्मृति मात्रै छन् । दरबारको चाकडी गरेर उनले सुन्दर यौवन मात्रै लुटाइन् ? सायद यो प्रश्न अहिले सुहाउँदो छैन । तर, जीवनको उत्तराद्र्धमा सडकमा फालिएका धेरै आमाहरुझैं उनी पनि वृद्धाश्रमको आश्रयमा छिन् । दिलशोभा श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको काठमाडौं रविभवनको आमाको घर उनका लागि खाने–बस्ने थलो बनेको छ । बालविवाहका कारण जीवन भताभुङ्ग भएकी सावित्री आफ्नो जीवनको खण्डखण्ड विश्लेषण गर्दै यति मात्रै निष्कर्ष निकाल्छिन्, ‘भावीले लेख्या, थालले छेक्या, कसैले नदेख्या ।’
साभार सौय दैनिक
लेकाली जीवनबारे ‘हिमालको गोठालो’
मिहनेत मरुभुमीमा गरे पनि खेर जाँदैन
गिरिजाबाबु, प्रचण्ड र लक्ष्मणबाबु
नारायणलाई हेर्न तँछाडमछाड
Prof. Malla Ramesh B., Ph.D. (University of Massachusetts – 1986)
गोरखामा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पाउनै साता कुर्नुपर्ने, मृत्यु भइसकेपछि बल्ल नतिजा
स्वीट्जल्याण्डदेखि गोरखासम्म साइकल यात्रा
मिसेस आदिवासी जनजाति २०२१ गोरखाकी आशा थापा
बिजुलीको स्वागत, दियालोको बिदाइ
गोरखामा मास्क नलगाएका सवारी चालकलाई ५ शय रुपैयाँका दरले जरिवाना
‘सरकार फेरिएपिच्छे आयोग बिघटन जनहितमा हुदैन’
बोक्सी आरोपमा लास काट्ने काशिगाउँका युवालाई छ महिना कैद, पाँच हजार जरिबाना
आरुघाट गाउँपालिकाद्वारा सय जना बिपन्न महिलाहरुलाई बाख्रा बितरण
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा वारपाक सुलिकोट उत्कृष्ट (गोरखाका कुन पालिकाले कति अंक ल्याए ?)
गोरखा दरबारको छाना छाउने काम सकियो
गोरखामा ४० प्रतिशत रोपाई सकियो
नास्टले गोरखाका डा.उत्तमबावु श्रेष्ठ सहित १७ जनालाई पुरस्कृत गरयो
गाेर्खा मिडिया प्रा लि
गाेरखा बजार, गाेरखा
Copyright ©2021 सर्वाधिकार गाेरखा मिडिया प्रा लि.